Dumarka Soomaaliyeed kuwooda madaxa Asturta & Kuwa madaxa Qaawan yaa Qurxoon xaqiiqo ahaan ? (Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Shacabka Soomaliyeed oo dalkoodii Hooyo uga soo cararay Colaad aan dhamaad leheen oo mar walba waji cusub la soo baxeeysa ayaa hadane waxeey Qurbaha kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan ka dib markii ay dhexda ka galeen Dhaqamo kale oo ay adag tahay sidii ay ula qabsan lahaayeen.
Caruurtii gaar ahaan Gabdhaha waxay Iskuulaadka la dhigtaan Caruur kale oo Madaxa u banaan yahay kuwaas oo iyagana dhankooda bilaaba inay Xijaabka tuuraan ama Madaxa baneeystaan.
Ma ahan wax ku cusub Waalidiinta Soomaaliyeed arimaha nuucaan ah balse waxaa la yaab noqotay Sanadihii ugu dambeeyay Qurbaha waxaa ku soo badanaya Gabdho Soomaaliyeed oo Madaxa baneeystay kuwaas oo la qabsaday dhaqanka dalalka ay ku nool yihiin.
Qaar ka tirsan Hablaha ama Dumarka Soomaaliyeed iyaga oo ku dhashay wadamada Qurbaha ayaa waxaa la xaqiijiyay ineeysan marnaba hilmaamin Asturaada Madaxa iyo waajibaadka saaran halka qaar kale oo gadaal ka tagay Wadamada Qurbaha ay durbadiiba bilaabeen inay iska tuuraan Asturaadii ama Xijaabkii Madaxa u saarnaa.